KETO वजन घटाउन को लागी चलाउँछ
घर » तार समाचार सेवाहरू » KETO वजन घटाउन को लागी चलाउँछ
नोभेम्बर 28, 2020
अब अर्डर गर्नुहोस् 1 1024x310 1
स्वास्थ्य, पोषण, र फिटनेसले धेरै व्यक्तिको जीवनमा केन्द्र बिन्दु लिएको छैन किनकि यो हालसालै हो। केटो खाना, असाधारण लोकप्रिय हो, के हो वजन घटाउने कल्पना को चारै तिर ध्यान दिएर, ठूला परिणामहरु संग।
केटो डाइट भनेको के हो?
केटोजेनिक डाइटको रूपमा पनि चिनिन्छ, केटो डाइट र तौल घटाउँदा कार्बोहाइड्रेट सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउँदछ, जबकि मध्यम र अधिक स्वस्थ वसा र फ्याटहरूको इन्जेसनमा जोड दिईन्छ। कम कार्ब प्रवृत्तिको कारण शरीरमा कार्बहरूको कुनै प्रतिबन्ध हो, मानव शरीरलाई आफ्नो शक्तिको स्रोतको कारण फ्याट स्टोरहरूमा फ्लिप गर्न सक्षम गर्दछ।
आधिकारिक वेबसाइटबाट यो केटो वजन घटाउने पिलिस पूरक (अन्तर्राष्ट्रिय) दावी गर्नुहोस्
यसले केटोन्स भनिने एसिडिक अणुहरूको विशाल निर्माणमा योगदान गर्दछ। यी सबै ketones कार्बोहाइड्रेट इन्जेसनको कारण उत्पन्न गरिएको ग्लूकोज भन्दा तपाईंको मानव शरीरको लागि वैकल्पिक ईन्धनको रूपमा कार्य गर्दछ।
अनिवार्य रूपमा, ketones केवल घटना मा सिर्जना गरिन्छ कि तपाईं आफ्नो कार्बोहाइड्रेट सेवन काफी कम भागहरूमा सीमित; त्यसैले कलेजो तपाईंको प्रणालीमा फ्याट स्टोरहरूमा केटोन्स उत्पादन गर्न बनेको हो। ठीक ठ्याक्कै उहि अवधिमा, केटोन्स दिमाग सहित मानव शरीर कार्यहरूमा ईन्धनको महत्वपूर्ण स्रोतमा परिणत भयो।
केटो डाइटले कसरी काम गर्दछ? वजन घटाउन को लागी केटो आहार कसरी सुरू गर्ने?
जे भए पनि केटो डाईटमा द्रुत तौल घटाउँदा, सम्पूर्ण शरीरले चिल्लो नभई चिल्लोलाई यसको ईन्धन स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। कार्बोहाइड्रेटहरूमा सीमितताको परिणामको रूपमा इन्सुलिनको स्तर कम हुन्छ, केटोन्सबाट चिल्लो जलेर २ 24/7 सञ्चालन गर्न दिन्छ। शरीरमा बोसो स्टोरहरू पनि आज छिटो पहुँच गर्न सकिन्छ, र किनभने यो फ्याट फाइट फाइटको खेल हो, त्यहाँ नाटकीय वजन घटाउने छ।
केटो डाइट वजन कम गर्न छिटो
केभोजेनिक खाना नौसिखाहरूका लागि बिस्तारै तपाईंको शरीरलाई बिस्तारै केटोसिसको अवस्थामा ड्रइ by गरेर। यद्यपि तपाईं यस अवस्थामा हुनुहुन्छ, फ्याट एक महत्त्वपूर्ण र मात्र ऊर्जाको आपूर्ति हो।
मध्यम र फ्याट प्रोटीन सेवनको बृद्धिले तपाईंलाई तृप्ति राख्छ, कम खाद्य तृष्णाको साथ।
पानीको तौल सीमित कार्बोहाइड्रेट सेवनको नतीजाको रूपमा सम्पूर्ण शरीरमा छिटो छोट्याइन्छ, जसको परिणामस्वरूप पहिलो दिन वा दुईमा केटोसिसमा जानेको प्रत्यक्ष भार कम हुन्छ।
केटोन्स, शरीरमा फ्याट भण्डारको एक तत्काल पुस्ता ईन्धनको रूपमा कार्य गर्दछ, जसले पोषण र क्यालोरी जलाउन चक्र आन्दोलनमा कार्य गर्दछ, एक चाँडो र निरन्तर वजन घटाउने परिणाम।
केटो आहार उत्पाद सामग्रीहरू
केटो खाना कार्यक्रमहरू बोसोको खपतको प्रकारलाई ध्यानमा राख्दछन्। स्वस्थ फ्याटले ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ जुन आहारले आग्रह गर्छ र ती खाद्य पदार्थहरू समावेश गर्दछ जुन स्याचुरेटेड फ्याटमा उच्च हुन्छ जुन चिल्लो मासु काट्ने, बटर र लर्डबाट आउन सक्छ। असंतृप्त फ्याटको राम्रो स्रोतहरूमा जैतुनको तेल, बदाम र नरिवल तेल समावेश छ। नट्स, एभोकैडो, र माछा तेल पनि के एक हिस्सा हुन सक्छ के एक स्वास्थ्यवर्धक बोसो खपत को लागी बनाउँछ।
यस केटो आहारका तत्काल फाइदाहरूमध्ये स्पष्ट वजन घटाउनु हो, जुन कार्बोहाइड्रेट सेवनमा सीमितताको कारण मूल रूपमा पानीको तौल हुन सक्छ। थप रूपमा, तपाईको ग्लूकोजमा कटौती गर्नुहोस् तपाईंको प्रणालीमा फ्याट स्टोरहरूबाट ऊर्जाको निरन्तर स्रोत प्राप्त गर्दै। यस प्रकारको उर्जा नवीकरणीय छ र तपाईंलाई गति दिनका लागि तपाईंलाई चिनीको स्तर र चिनी क्र्यासहरू आवश्यक पर्दैन।
केटो आहार समीक्षा
* नतिजा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फरक हुन सक्छ
केटो डाइटको साइड इफेक्टहरू
केटोजेनिक खानामा पहिलो पटक धेरै गाह्रो हुन सक्छ आहारमा कठोर परिवर्तन र संशोधनको कारण। तपाई शरीरमा चिनी स्रोतको अभावको परिणाम स्वरूप कमजोर, अव्यवस्थित र भंगुर हुने आशा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं प्रायः तरल पदार्थ र पानीको एक धेरै सम्झौता हटाउनुहुन्छ जुन सजिलै निर्जलीकरणको परिणाम हुन सक्छ। जहिले पनि निश्चित हुनुहोस् कि तपाईंले कुनै पनि आहार वा पौष्टिक पूरक आहार सुरू गर्नु अघि तपाईको चिकित्सकसँग कुरा गर्नुहुन्छ।
केटो उन्नत वजन घटाउने वजन घटाउने सफलता दर
केटो डाइटको वजन घटाउने दर उपलब्धि ज्यादातर व्यक्तिगत प्रतिबद्धतामा र निर्भर गर्दछ। चाँडै तपाईं खाना अनुपात मा धोका दिन्छ ठीक ठीक दोस्रो दोस्रो कि आहार तपाईंको लागि कार्य गर्न असफल।
वजन घटाउन को लागी उत्तम केटोजेनिक डाईट
केटो आहार दुबै दिगो र स्थायी सकारात्मक स्वास्थ्य परिणामहरू उत्पादन गर्न सकियो। स्पष्ट केटोजेनिक आहार परिणाम वजन वजन घटाउने बाहेक, धेरै पुरुष र महिला इन्सुलिन प्रतिरोधबाट फाइदा लिन झुकाउँछन्, माथिल्लो रक्तचापमा कमीको अतिरिक्त।
प्रामाणिक वजन घटाउने खानाको लालसामा सीधा कमीको कारण आउँदछ किनभने फ्याट खपतमा वृद्धि भएको छ जुन तपाईंको तृप्ति प्रभावलाई पनि योगदान गर्दछ।
केटो डाइटमा यदि तपाईले तौल गुमाउनु भएको छैन भने के हुन्छ?
आजका दिनहरूमा शरीरको तौल घटाउन केटोनिक आहार सबैभन्दा मनपर्दो आहारहरूमध्ये एक हो। तर सबैजना भाग्यशाली हुँदैन केटोजेनिक डाइट कम भएपछि तौल घटाउन।
बोसो घाटाको लागि केटो आहारको प्रभावहरू मानव शरीरको मेटाबोलिज्म र प्रतिक्रिया दिन मानव शरीरको कौशलमा निर्भर हुन्छ। तर केटो उपवासले तपाईंको शरीरमा कुनै प्रभाव पार्दैन? थप उपायहरू के के हुन्?
ठीक छ, तपाईंले केही सीधा उपायहरू सहित थप प्रयासहरूको साथ धक्का दिनु पर्छ:
नियमित दिनचर्याको तुलनामा क्यालोरीको खपत १-15-२०% घटाउनुहोस्। यसलाई मौलिक रूपमा कम नगर्नुहोस्, केवल वृद्धिमा जानुहोस्। यद्यपि, पूर्ण रूपमा खानु नगर्नुहोस् किनभने यसले गम्भीर असर पार्न सक्छ।
तपाईको मांसपेशीहरू सक्रिय राख्न मद्दतको लागि अक्सर व्यायाम गर्नुहोस्। व्यायामले तपाईंको शरीरमा ठूलो प्रभाव पार्छ किनभने रगत प्रवाह पम्पिंग मुटुको दरको साथ ठूलो परिणाम दिन्छ। अधिक परिणाम प्राप्त गर्नका लागि बढी कार्बोहाइड्रेटको साथ खाद्य पदार्थहरूको उपभोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
चिनीको उपभोग घटाउने भार कटौती घटाउने अर्को प्रमुख कदम हो। चिनीले तौल घटाउँछ र यसको अतिरिक्त, यसले हृदय रोगको सम्भावना बढाउँछ।
आलु कार्बोहाइड्रेटमा अत्यन्त प्रचुर मात्रामा हुन्छ जसले वजन घटाउन योगदान गर्दछ। त्यसो भए, आलु इन्जेसन नगर्ने र हरियो पातको भेगाहरू सँगै ताजा फलहरू जस्तै गाजरको रूपमा खान नखोज्ने प्रयास गर्नुहोस्।
एउटा राम्रो बानी भनेको तपाइँको खानामा समय मिसाउनु भनेको नियमित रूपमा उपभोग नगरी वा धेरै स्न्याक्स विभाजनको आवश्यकता पर्दैन। तपाईंको खाद्यान्नको साथ तपाईंको स्नैक्समा समर्पित समय स्लट लिनुहोस्। यसले तपाइँको शरीरलाई समन्वय गर्न मद्दत गर्दछ।
अन्तत: तपाईले धैर्यता लिनुपर्दछ जब कि केटो डाईट सुरु गर्नुहुन्न। कुनै पनि उपक्रमको लागि धैर्य कुञ्जी हो। तपाईले परिणामलाई तुरून्त बुझ्नुहुने छैन, यसले केटोजेनिक आहार उपलब्धि लिन केहि समय लिन सक्दछ।